Vakashela i-CEO yaseBrithani ishiya phansi iNtwasahlobo ka-2022
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba ze-UK Breaking » Vakashela i-CEO yaseBrithani ishiya phansi iNtwasahlobo ka-2022
Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Industry Hospitality Industry • Izindaba • Abantu • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba ze-UK Breaking
VakashelaBritish/VisitEngland CEO Sally Balcombe
UNksz Balcombe, oseke waba yi-CEO, owaqala e-VisitBritain kwase kuba yi-VisitBritain/VisitEngland, iminyaka engaphezu kweyisikhombisa, ushiya inhlangano yezokuvakasha kazwelonke ukuze iphishekele amathuba amasha.
VakashelaBritish/VisitEngland CEO Sally Balcombe umemezele ukuthi uyahoxa kulesi sikhundla ngentwasahlobo yalo nyaka.
UNksz Ballcombe, oke waba yi-CEO, okokuqala kwe-VisitBritain kwase kuba ngo- Vakashela eBrithani/Vakashela eNgilandi, iminyaka engaphezu kweyisikhombisa, ishiya i-ejensi yezokuvakasha kazwelonke ukuze iphishekele amathuba amasha.
UNksz Ballcombe uthe kube yilungelo ukuhola inhlangano yezokuvakasha kuzwelonke.
“Ngesikhathi ngijoyina, ngo-2014, besivele siyisikhungo esenza kahle siseka imboni esezingeni lomhlaba, eyimpumelelo. Kuze kube yilolu bhubhane, imboni yethu yasuka ekubeni namandla, iheha izinombolo ezirekhodiwe zakho kokubili ukuvakasha nokuchithwa, ukudala amathuba emisebenzi kanye nokukhula komnotho.
“Kwabe sekufika i-COVID, yashaya imboni yethu kuqala futhi kanzima. Umkhakha wethu ubulokhu ukwazi ukuzivumelanisa nezimo futhi i-COVID ibingehlukile, njengoba izikhungo zezingqungquthela ziba izibhedlela namamnyuziyamu nezinto ezihehayo ezithatha amaqoqo azo ku-inthanethi.
"Njengoba singena ngonyaka ka-2022, imboni yethu isaqhubeka nokubhekana nezinselelo eziningi futhi esigxile kukho wukuthuthukisa ezokuvakasha ngokushesha obhubhaneni lwe-COVID-19 ngokubuyisela imali esetshenziswa abavakashi ngokushesha okukhulu nokweseka imboni."
I-British Tourist Authority (BTA) USihlalo wesikhashana u-Dame Judith Macgregor uthe:
“Egameni leBhodi le-BTA kanye Vakashela eBrithani/Vakashela eNgilandi Ngithanda ukudlulisa ukubonga okukhulu ku-Sally ngobuholi bakhe obuvelele nobunobuhlakani eminyakeni eminingi kangaka yentuthuko eyimpumelelo kanye nokuqondisa i-ejensi ebunzimeni balolu bhubhane, ukubeka izinto eziza kuqala kuyo kanye namasu esikhathi eside okusekela le mboni ekhahlamezekile. ngokusebenzisa ubunzima ukuya ekululameni nangale kwalokho.
“U-Sally ube negalelo elibalulekile nelihlala njalo embonini yezokuvakasha yase-UK, hhayi nje ngesikhathi eseyi-CEO. Vakashela eBrithani/Vakashela eNgilandi, kodwa ngomsebenzi ohlanganisa iminyaka engaphezu kwengu-40 ekuhambeni. Sifisela uSally konke okuhle ngekusasa.”